Nkọwa:Egwurugwu ọkụ na-ekpuchi ọkụ,Ebube Na-enwu Agbanwe Maka Ebe Ngwá Gas,Ejiri Mgbaba Ndị Na-ahụ Maka Gas
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu Gas > 130W Enwere ike ịmalite ikpo ọkụ ụgbọ mmiri
Igwe a 130W na-ekpuchi Led Gas Canopy Lights na- enwe 15600 lumens na ogo ihu nke ogo 120. Ebube ndị a maka ikpo ọkụ gas nwere ike ịnweta CRI nke 80 ma nwee ike inye ọkụ ọkụ, 5000K ma n'èzí na ime ụlọ. Ejiri Mgbaba Ụlọ Ọrụ Gas a nwere njedebe Ingress nke 65, nke pụtara uzuzu kpuchie ma chebe ya pụọ ​​na mmiri si n'akụkụ niile. Ngwakọta kọmpat nke ọdụ ụgbọ ala a na- eme ka ìhè ọkụ na- eme ka ọ dabara na ntọala dịgasị iche iche dị ka ụgbọ ala gas, ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ ala, ebe ndị na-adọba ụgbọala na-ekpuchi na ebe ndị dị n'ime ime ụlọ. Ụgbọ ala anyị na-enye ìhè dị mfe ịgbaso akwụkwọ nrụnye maka usoro nkwụnye ọkụ. Usoro na-agụnye oghere ntụrụndụ na ntinye na arịlịka ndị a gụnyere ka a dọrọ n'ime ụlọ.
150Watts Gas Station Canopy Light Fixtures Kpọtụrụ ugbu a
130W Egwuregwu Ngwá Agha Na-ahụ Maka Ọdụ Ụgbọ Mmiri Kpọtụrụ ugbu a
100W Egwuregwu Ngwá Agha Ndị Na-ahụ Maka Ọkụ Mmiri Fixtures Kpọtụrụ ugbu a
60W Na-enwu n'èzí n'ìhè maka ọdụ ụgbọ oloko Kpọtụrụ ugbu a
130W Egwuregwu Ịgba Ọkụ Na-enwu n'Oké Osimiri Na-adịghị Anya Kpọtụrụ ugbu a
100W N'ọdụ ụgbọ mmiri a na-agbanye n'ọdụ ụgbọ mmiri Kpọtụrụ ugbu a
60W Led Gas Station Canopy Lighting Fixtures Kpọtụrụ ugbu a
150W Ejiri ọdụ ụgbọ elu ọkụ ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Egwurugwu ọkụ na-ekpuchi ọkụ Ebube Na-enwu Agbanwe Maka Ebe Ngwá Gas Ejiri Mgbaba Ndị Na-ahụ Maka Gas Egwuregwu ọkụ ọkụ Ụlọ ọkụ na-ekpuchi ọkụ Enwu ọkụ na-ekpuchi Igwe ọkụ na-ekpuchi ọkụ gas na 150w Ngwá ọkụ na-ekpuchi ọkụ ọkụ 150w